OTU ESI EMEZI NJEHIE 192 N'AHỊA EGWUREGWU - GWUO AHIA - 2019
Isi Gwuo ahia
Agbanwe koodu njehie 192 na Ụlọ Ahịa Google
Adịgboroja antivirus anaghị ekwe nkwa nchedo ụdị egwu ọ bụla. Ya mere, anyị na-anwa ịchọta ndị nyocha ọzọ na-achọpụta ihe egwu nke antivirus agbaghara.
Taa, anyị ga-ekwu maka obere ọrụ CrowdInspect. Isi ọrụ ya bụ ịchọọ ịchọta enyo, usoro zoro ezo na usoro. Iji mee nke a, ọ na-anakọta data gbasara ha site na ọrụ, gụnyere VirusTotal, Web of Trust (WOT), Aha Cymru's Malware Hash Registry.
Uzo ahu jiri agba di iche gosi ndi ozo ogo nke egwu obula. Green - a pụrụ ịdabere na ya, isi awọ - enweghị ezi ozi, ọbara ọbara - dị ize ndụ ma ọ bụ oria. Ụzọ mbụ dị otú ahụ na-eme ka nghọta dị mfe.
Nchịkọta data nchịkọta oge
Ozugbo ị malitere CrowdInspect, ọ ga-amalite ozugbo ịlele usoro niile, na gburugburu na ogidi ndị na-egosipụta ozi anakọtara site na ọrụ dịgasị iche iche ga-enwupụta n'ụdị dị iche iche na-egosi ọkwa nke iyi egwu ahụ. Na-egosiputa data nke TCP na UDP protocols, n'ụzọ zuru ezu na faịlụ nke a na-arụ ọrụ. N'oge ọ bụla, ị nwere ike mepee aha nke usoro ahụ achọrọ, yana nchoputa ya dị na VirusTotal.
Na mgbakwunye na njirimara nile, ị nwere ike ịhụ ọkwa - mgbe usoro e debere, yana ụbọchị na oge (kpọmkwem ruo na nke ikpeazụ). Maka nke a, enwere bọtịnụ pụrụ iche na nchịkọta nhọrọ nke ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ imechi ngwa ma ọ bụ ngwa ọ bụla, mgbe ahụ, ọrụ ahụ na-enye ọrụ dị otú ahụ. Naanị pịa bọtịnụ ntụrụndụ dị mma na usoro achọrọ ma họrọ na listi na-egosi "Kwụsị usoro". Ị nwere ike ime ka ọ dịkwuo mfe wee pịa bọmbụ "bọmbụ" n'elu menu.
Ikike imechi usoro ịbanye na Ịntanetị
Akụkụ ọzọ bara uru nke ọrụ ahụ na-egbochi ngwa iji nweta netwọk. Nanị họrọ ihe ị chọrọ, wee jiri bọtịnụ òké aka, họrọ ihe ahụ "Mechie Njikọ TCP". Nke ahụ bụ, CrowdInspect nwere ike ịme ọrụ dịka Firewall dị mfe, nke a na-ejikwa aka ya.
Na-anakọta data niile ozugbo;
Ozugbo mechara usoro ọ bụla;
Definition of thread injection.
E nweghị asụsụ Russian;
Enweghị ụzọ isi wepụ iyi egwu ahụ site na ngwa ahụ.
N'ikpeazụ, anyị aghaghị ikwu na CrowdInspect abụghị nsogbu kasị njọ. Ihe ọrụ ahụ nwere ike ịnakọta data niile gbasara usoro ọ bụla, ọbụlagodi ndị na-ezo. Ị nwere ike chọpụta ụzọ zuru ezu na usoro nje ahụ, mezue ya ma wepụ ya aka. Nke a bụ ma eleghị anya naanị azụghachi. Nchịkọta Mmadụ naanị na-anakọta ozi na ngosipụta, ị ga-arụkwa ọrụ niile n'onwe gị.
Download CrowdInspect maka n'efu
Ngwa ngwa ngwa Ọ bụ JụọAdmin Speedtest
Nlekọta anya bụ ngwa bara uru maka nyocha ngwa ngwa na nchọpụta nke egwu ndị nwere ike ịmegide ọgụ nje na ngwanrọ ọjọọ ndị ọzọ.
Onye Mmepụta: Vlad Constantinescu
https://termotools.com ig.termotools.com © Gwuo ahia 2019